Malunga nathi -YINGHE ZOMBANE ZEZIXHOBO CO., LTD
Ifomathi enkulu yefomathi
Umshicileli we-Eco solvent
Umshicileli we-UV flatbed
Umatshini wokushicilela iflegi
Umatshini oyimfakamfele wasekhaya
Umatshini wokulungisa intloko we-1
Iintloko ezi-2 zomatshini wokuhombisa
Iintloko 4 umatshini oyimfakamfele
Iintloko 6 umatshini oyimfakamfele
Isixhobo sokusika i-desktop
Isixhobo sokusika isixhobo
Sublimation Ubushushu Press
Izikhululo eziphindwe kabini zomatshini wokucinezela
Umatshini wokushicilela wokushisa ubushushu
Umatshini wokushicilela umatshini wobushushu
Plate Umatshini wokushicilela ubushushu
5 kumatshini 1 wokushicilela ubushushu
8 kumatshini wokucinezela oshushu we-combo
Umatshini wokushicilela we-3D Sublimation Vacuum
4 umbala kunye 4 station umatshini yoshicilelo screen
4 umbala kunye 4 station vernier screen umatshini yoshicilelo
Umatshini wokulaminetha oshushu nabandayo
Umatshini wokulaminetha omncinci
Umatshini wokulaminetha we-YH360
YH460 umatshini wokulaminetha
Umatshini wokulaminetha we-YH650
Umatshini wokulaminetha oshushu
Wokulaminetha Cold kunye umatshini ukusika
I-CO2 Laser engraver kunye nokusika
Ifayibha laser engraver kunye mgawuli
Ikhadi kunye nomatshini wesipho
Flatbed Umatshini ngefoyile ye eshushu
Umshicileli wekhadi le-PVC
Incwadi yemifanekiso yokwenza umatshini
Umatshini wokwenza ialbhamu
Imbali ye-YINGHE kunye nemowudi yeshishiniI-YINGHE ELECTRONIC INSTRUMENTS CO., LTD kuphela kwivenkile ethengisa izinto zasekhaya enendawo yokugcina iinkonzo zangaphakathi kwilizwe liphela.
Inkampani yethu yasekwa ngo-2002, emva kweminyaka yophuhliso, u-YINGHE uye waba sisixhobo esaziwayo sasekhaya nakwamanye amazwe esinezixhobo zobuchwephesha zeshishini langoku, isikali senkampani, iimveliso kunye neenkonzo kweli lizwe zikwindawo yesibini. Iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kumazwe angaphezu kwama-200 kunye nemimandla yehlabathi.
Ifilosofi yoShishino: ingxaki, ukurhweba, ukufunda, ukwenza izinto ezintsha, ukusebenzisana kwezimvo zenkcubeko.
Umbono woShishino: ukwakha izixhobo zokuqala ezinqamlezileyo zamazwe e-AMAZON e-China; ukuseta iinkonzo zenkampani kunye nendawo yokugcina izinto kunye neziko lokubonisa imveliso kwihlabathi liphela leemveliso zehlabathi kunye nendawo yokugcina izinto.
Amaxabiso amaShishini: ukunamathela kumxholo wabathengi kuqala, ithuba apha, yimpumelelo nathi! Vumela umthengi kunye nomthengisi kunye no-YINGHE badibane baye empumelelweni.
Umsebenzi woShishino: iinkonzo zenzululwazi kunye netekhnoloji ubomi obonwabisayo bomntu.
Iimveliso zeNkampani zihleli: intengiso, ushicilelo, ukupakisha, impahla, ukulungiswa kwesinyithi, ilitye, iglasi, ushicilelo, ulusu, izixhobo zeofisi.
I-Yinghe yeOverseas Warehouse
Amazwe aseAfrika: izixeko ezi-5 eNigeria, eLagos, e-Onitsha, eKano, e-Abuja, e-Aba, kwizixeko ezi-2 eGhana: iAccra, iKumasi, iCôte d'Ivoire, iMali, iMadagascar, iSenegal, iCongo, iCongo neLuben iBrazil, iZambia, iKenya, iAngola. , Cameroon, Zimbabwe, Mzantsi Afrika, Mozambique, Mauritius, Uganda, Egypt, Rwanda, Tanzania.
Asia: Manila, Philippines, Mumbai, India, Dhaka, Bangladesh, Ho Chi Minh, Vietnam, Kuala Lumpur, Malaysia, Jakarta, Indonesia, Bangkok, Thailand, Seoul, South Korea, Kazakhstan, Dubai.
Amazwe aseMelika: eLos Angeles, e-USA, eCali, eColombia, eBolivia, eBrazil (kwisixeko se-ITAJAI, kwisixeko saseCuritiba), eMexico, eHonduras.
IYurophu: IMadrid, iSpain, iIstanbul, iTurkey.
Inkampani ye-YINGHE ayichithi nje ixesha elininzi kulawulo lomgangatho, kodwa ikwazisa ngokuqhubekayo iimveliso ezintsha kwintengiso, iimveliso ezingaphezulu zokufumana imigangatho yokuqinisekiswa kwe-European CE, inkampani ye-YINGHE ibalwe njengabanikezeli ababalaseleyo eTshayina, eGuangdong TOP TEN , ukuthatha inxaxheba kwi-philanthropy, siyakholelwa ukuba i-YINGHE iya kuqhubeka nokuzisa ukumangalisa kwintengiso.
Ithuba apha, phumelela kunye nathi!
Inombolo 8 yendlela, iBaimibu Xiushui Industrial Park, indlela yaseburhulumenteni eyi-106, Idolophu yaseRenhe, iSithili saseBaiyun, eGuangzhou, China.